Ny fironana ara-teknika amin'ny indostrian'ny fiantohana - Victor Mochere
Ny indostria dia manohy manitsy ny tolo-kevitry ny varotra mifandraika amin'ny mpanjifa sy ny maodely fandraharahana mba hijanonana amin'ny fandraharahana ary hijanona ho tombony. Ary ny indostrian'ny fiantohana dia tsy maningana amin'izany. Ny mpiantoka dia mandinika ny hafatr'izy ireo ary mifantoka amin'ny fampahafantarana tsara kokoa sy mifandray amin'ny tsena lasibatra. Fanampin'izay, mba hamahana tsara kokoa ny fiovana mifandraika amin'ny fitondran-tena mividy. Ambonin'izany, ny fironana ara-teknolojia sasany dia napetraka hanova ny toetran'ny vokatra fiantohana. Miomana hiatrika hoavy nomerika ny indostrian'ny fiantohana. Ny teknolojia dia hanana anjara toerana lehibe kokoa amin'ny fizarana sy fivarotana vokatra fiantohana amin'izao vanim-potoana vaovao izao.
Ireto ny fironana teknolojia fototra amin'ny indostrian'ny fiantohana.
1. Intelligence artifisialy (AI)
Efa mampiasa AI ny mpamatsy fiantohana mba hanampy amin'ny fitantanana ny politika, ny famandrihana ary ny fisavana hosoka. Amin'ny ho avy, AI dia hampiasaina hamolavola politika manokana ho an'ny mpanjifa mifototra amin'ny filany manokana. AI dia afaka manampy ny fiantohana amin'ny famolavolana vokatra sy serivisy vaovao. Ohatra, ny AI dia azo ampiasaina hamoronana mombamomba ny mpanjifa izay ahitana angon-drakitra momba ny taonan'ny mpanjifa, ny maha-lahy na maha-vavy, ny asa, ny naoty bola ary ny tantaran'ny fiara.
Ny mpiantoka dia afaka mampiasa ireo fampahalalana ireo avy eo mba hanoroana vokatra sy serivisy izay namboarina manokana ho an'ny mpanjifa. Afaka mampiasa AI ihany koa ny mpiantoka mba hanaraha-maso ny fampiasana ny serivisy sy ny vokatra ataon'ny mpanjifany. Azon'izy ireo atao avy eo ny mamakafaka ny angon-drakitra voaangona avy amin'ity fanaraha-maso ity mba hanatsarana ny tolotra efa misy, hamolavola vaovao ary hamantarana ireo fitakiana hosoka. Rehefa mivoatra ny AI, ny mpiantoka dia hiatrika amin'ny fomba mahomby kokoa ny habetsaky ny fampahalalana momba ny mpanjifa, indrindra fa ny tahan'ny fiantohana dia lasa mifaninana.
Ny Internet of Things dia manondro ireo fitaovana an'arivony tapitrisa mifandray amin'ny Internet. Manomboka miditra amin'ny angon-drakitra sy fampahalalana be dia be novokarin'ireo fitaovana ireo ny mpiantoka. Ny ho avy dia ity teknolojia ity dia hampiasaina hampitomboana ny isan'ny olona azo antoka, hifehy ny vidin'ny fitakiana, hamantarana ireo mpisoloky ary hanatsara ny fifandraisan'ny mpanjifa. Ny dingana voalohany ho an'ny mpiantoka dia ny fanangonana ny angona rehetra avy amin'ny fitaovana IoT. Anisan'izany ny finday avo lenta, solosaina ary teknolojia azo ampiasaina toa an'i Fitbit.
Ny zavatra manaraka tokony hataon'ny orinasa fiantohana dia ny famakafakana ireo angon-drakitra ireo mba hahatakarana ny sanda mety hitranga; sahala amin'ny fitadiavana sarintany harena misy X eo aminy. Ny Big Data dia iray amin'ireo loharanon-karena ilaina amin'ny fiantohana mba handraisana fanapahan-kevitra tsara kokoa sy tsara. Ny angon-drakitra voaangona avy amin'ny fitaovana IoT dia afaka manampy amin'ny famantarana ny lamina sy ny fironana, izay tsy azon'ny loharanom-baovao mahazatra toy ny fanadihadiana.
Raha vao takatry ny orinasa fiantohana ny lanjan'ny angon-drakitra, dia afaka mampiasa izany izy ireo hanatsarana ny asan'izy ireo. Ohatra, afaka mampiasa fitaovana finday hidirana amin'ny sarintanin'ny toerana misy ny lozam-pifamoivoizana ny mpandrindra ny fitakiana, amin'ny fotoana rehetra, mampihena ny fahatarana ary manatsara ny fahafaham-pon'ny mpanjifa. Ny orinasa fiantohana aina dia afaka mampiasa angon-drakitra avy amin'ny fitaovana IoT hahitana raha mbola velona ny tompon'ny politika.
Ohatra, bracelet maranitra izay manara-maso famantarana tena ilaina sy mandefa angona any amin'ny orinasa fiantohana dia azo ampiasaina ho porofon'ny fiainana ho an'ny politika maharitra tsy misy fanavaozana isan-taona. IoT dia hanana anjara toerana lehibe amin'ny fampandrosoana ny dingana mifandraika amin'ny fiantohana, toy ny fisorohana ny risika, ny fampahavitrihana ny mpanolotsaina ary ny fihazonana ny mpanjifa.
Ny RPA dia misy robots rindrankajy izay mampiasa algorithm amin'ny faharanitan-tsaina artifisialy mba hikarakarana ireo asa fitantanana miverimberina toy ny fanodinana fandoavam-bola na fanontaniana momba ny serivisy mpanjifa. Amin'ny ho avy, ny RPA dia hampiasaina hanafaingana sy hanamafisana ny fizotry ny fitakiana. Lasa malaza kokoa amin'ny indostrian'ny fiantohana ny RPA. Ny teknôlôjia dia afaka manampy ny mpiantoka hanafaingana ny fizotrany, hampihenana ny fandaniana ary hanatsara ny fahafaham-pon'ny mpanjifa.
Amin'ny ho avy, ny RPA dia hampiasaina hanamarihana ny fizotran'ny fitakiana. Hanampy ny mpiantoka hamonjy fotoana sy vola eo am-panatsarana ny tolotra mpanjifa izany. Ireo mpiantoka izay tsy mampiasa RPA amin'izao fotoana izao dia tokony handinika ny fampiharana ny teknolojia atsy ho atsy. Mbola teknolojia vaovao ihany ny automation process robotic. Na dia tsy mbola ampiasaina betsaka aza izy io, ny robots rindrambaiko dia afaka mamita asa sarotra be amin'ny fahitsiana sy haingana.
Maro no mino fa amin'ny hoavy, ny RPA dia hampiasain'ny orinasa fiantohana mba hanamafisana ny fizotran'ny fitakiana sy ny sehatra hafa amin'ny asa fandraharahana. Amin'ny alàlan'ny fanaovana automatique ireo asa mahazatra ireo, ny mpiantoka dia afaka miantoka ny fahamarinan'ny fanangonana angon-drakitra. Ho fanampin'izany, hanafaka ny mpiasa hiasa amin'ny asa sarotra kokoa izany, toy ny famolavolana vokatra na serivisy vaovao ary fanatsarana ny fifandraisan'ny mpanjifa.
Ireo fironana ara-teknolojia ireo dia manana fahafahana sy hery hanovana ny sasany amin'ireo asa fototra sy ny fampidirana fototra amin'ny vokatra fiantohana. Ireo mpiantoka izay tsy mampiasa vola amin'ireo fironana ireo dia ho sarotra ny hiaina amin'ny vanim-potoana maoderina. Tsy maintsy araraotin'izy ireo ireo fahafahana izay mitondra fitomboana sy hevitra vaovao. Mampiasa vola amin'ny fanavaozana na fanovana ny dian'ny mpanjifa amin'ny fisafidianana ny politikan'ny fiantohana sy ny famaritana ny tahan'ny politika.
Ahoana ny fomba hijanonana mamokatra rehefa miasa ao an-trano